Ukujongana neziXhobo zabaThengi kunye nendlela onokuThengisa ngayo kunye nabo | Martech Zone
Ukujongana nezixhobo zabaThengi kunye nendlela onokuThengisa ngayo kunye nabo
NgoMvulo, Meyi 4, 2015 NgoLwesihlanu, Novemba 17, 2017 Douglas Karr
Kwintengiso yanamhlanje, umsebenzi weCMO uya usiba ngumceli mngeni ngakumbi nangakumbi. Itekhnoloji itshintsha indlela yokuziphatha kwabathengi. Kwiinkampani, kuye kwaba nzima ukubonelela ngamava eentlobo ezihambelana neendawo zentengiso kunye neepropathi zazo zedijithali. Amava abaThengi phakathi kwe-brand online kwaye ubukho bomzimba buyahluka kakhulu. Ikamva leentengiso lilele ekuvaleni le yedijithali kunye nokwahlula ngokwasemzimbeni. Izixhobo zokujongana noMthengi zenza ukuhlangana okuDibeneyo kwidijithali kunye nokuhambelana ukuze kuphakanyiswe amava abathengi kwiindawo ezibonakalayo.
A Isixhobo esijongana noMthengi sisixhobo esiya kuthi umthengi adibane naso okanye amava ngokuthe ngqo. Imizekelo yeziXhobo zokuJongana nabaThengi zibandakanya iiKhamera eziDijithali, indawo yokuThengisa eyiMfono (mPOS), izixhobo eziRuggedized, imiqondiso yedijithali okanye izixhobo ezingenantloko. Zonke ezi zixhobo zenzelwe ukubandakanya nokwazisa abathengi ngaphakathi kweendawo ezibonakalayo.
Izixhobo zokujongana noMthengi ziwela kwiindidi ezintathu
Izixhobo zedijithali Izixhobo ezihambisa ukuNxibelelana kwidijithali kunye nokuvela. Imizekelo ibandakanya imiqondiso yedijithali, iitafile kunye neeKhioski zedijithali.
Ukudlula -Izixhobo ezithi zikhawuleze ukuGqithisela abaThengi Imizekelo ibandakanya iNqaku leNtengiso yeNtengiso (i-mPOS) kunye nezixhobo zokufezekisa iodolo.
Amava -Izixhobo eziphakamisa amava abaThengi. Imizekelo ibandakanya i-Intanethi yeZinto (i-IoT) iiHubs zeSensor, iiIoT ezingenantloko izixhobo).
Amashishini ayasebenzisa Ukujongana nezixhobo zabaThengi Njengee-kiosks zokuzenzela iinkonzo zabathengi babo. Ezi zivenkilana ziququzelela uluhlu olubanzi lwezinto zokuthenga ukusuka kumava angapheliyo e-aisle kunye nokwenziwa kwemveliso kwivenkile yokungena ngaphakathi kunye noku-odola ukutya kwiivenkile neehotele. Amashishini asebenzisa imiqondiso yedijithali eyahlukileyo kumakhulu eendawo ukwenza amava eempawu ezihambelanayo. Iimpawu zedijithali zisetyenzisiwe ziimpawu zorhwebo lwentengiso yedijithali, uphawu-lwendlela kwiivenkile zokutya, indlela yokufumana imiqondiso, imiqondiso yomnyhadala nokunye okuninzi. Iimpawu zedijithali sisisombululo esineendleko ngakumbi nesomeleleyo kunemibhalo eprintiweyo, evumela amashishini ukuba asebenzise ividiyo kwimiboniso endaweni yemifanekiso emileyo.
Amashishini abeka izixhobo zokujongana noMthengi ezandleni zabasebenzi ukuze baphucule indlela yokuthenga. Ezi zixhobo zentengiselwano, ezinje ngeMPOS kunye nezixhobo zokufezekisa iodolo kwiivenkile zokutyela, zivumela abasebenzi ukuba baphucule inkonzo yabathengi ngokusebenzisa iinkqubo ezifanelekileyo ngakumbi kunye nokwandisa ubukrelekrele malunga zombini iimveliso kunye nomsebenzi wabathengi.
Amabhanti aqalise ukusebenzisa izixhobo ezijongana noMthengi ukulawula amava eemvakalelo zabathengi babo. Amanqaku ayakwazi ukulandelela ukuhamba kwabathengi kunye nokugcwala kwabantu ngee-hubs zenzwa. Ngokusebenzisa izixhobo ezingenantloko, ivenkile inokutshintsha ukukhanya, iifomathi ezinkulu ezibonakalayo kunye nomculo ngamandla. Ngezi zinto zovakalelo kulawulo lwazo, iimveliso zingenza amava abathengi ngokuhambelana kwiindawo ezininzi zokuthengisa. Ezi zixhobo azidingi sikrini, kodwa njengazo zonke izixhobo ezijongana noMthengi, zinokulawulwa kude.
IziXhobo zokujongana noMthengi zihambisa ukuNxibelelana kweDijithali efanelekileyo kunye nemeko ebandakanya abathengi. Ngokuhambisa, ukulinganisa kunye nokwenza intsebenzo ngeDijithali, ungaqhubeka ukonyusa iinzame zakho zentengiso ngaphakathi nevenkile ukonyusa intengiso kunye nokwoneliseka kwabathengi. Imigangatho, iitafile ezishelfini zinokuguqulwa ziziXhobo zokuJongana nabaThengi kunye nezixhobo ezingenasentloko zinokuthengwa ngaphantsi kwe- $ 200. Izixhobo zokujongana noMthengi zibonelela ngesisombululo esomeleleyo kunye neendleko ezifanelekileyo kwiimfuno zakho zentengiso ye-omni-channel.
Ukunceda iiCMOs ukuba ziqonde ixabiso leziXhobo zokujongana noMthengi kunye nendlela yokuzisebenzisa kwisicwangciso-qhinga sokuthengisa, uMoki wenze "Isikhokelo seCMO Kwizixhobo Zokujongana noMthengi."
tags: izixhobo ezijongene nabathengiIivenkile zedijithaliuphawu lwe digitalyasebukhosi-izixhobo ezingenantlokoiihabs zeenzwa zenzwaiikholejiInqaku leselula lokuthengisaImboleko ephathekayomPOSukuzaliseka komyalelomacwecwe
Iimpawu ezi-5 uphuma kwindawo yogcino lwedatha ye-MySQL
Luthini uhlalutyo lweqela likaGoogle loHlaziyo? Isikhokelo sakho esineenkcukacha